City Hunter ( 1993 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel March 08, 2017
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ 1993 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ တဲ့ Jackie Chan ရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
အလွတ်စုံထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကော အရမ်းကို အချစ်များတဲ့ မာပေါ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ Jackie Chan ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အလွတ်စုံထောက်တစ်ယောက်က သူအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း က သေခါနီး သူ့ညီမကို စောင့်ရှောက်ဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။ သူက စောင့်ရှောက်ရင်နဲ့ အတူတူတွဲပြီးစုံထောက်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဂျပန်သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင်က သူ့သမီးက အိမ်ကနေဆင်သွားလို့
မာပေါ်ကို ရှာဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာလဲ သူ့ညီမက သူကိုစိတ်ဆိုးပြီး အပျော်စီးသင်္ဘောကို အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ အတူသွားခဲ့ပါတယ်။
မာပေါ်မှာ လက်မှတ်မရှိပဲ သဘောင်္ပေါ်ကို ခိုးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့သဘောင်္ကို ဓါးပြတိုက်မယ့်အဖွဲ့နဲ့လဲ တိုး သူတို့အလုပ်အပ်ထားတဲ့ သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးနဲ့လဲတိုးပြီး
ရယ်စရာဟာသတွေ အက်ရှင်တွေ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်...
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 6.5/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် ...
File Size ( 720p ) -1.2GB
File Size ( 360p ) - 399.4 MB
Download with V.I.P Link
Download with Pcloud(399.4MB Small Size)
Download with Pcloud (1.2GB Large Size)
Labels: Action Hong Kong
Blog Contest | You Can Join March 15, 2017 at 9:54 AM